Xilliga ay Juventus sida rasmiga ah ugu dhawaaqi doonto heshiiska Adrien Rabiot oo la shaaciyay – Gool FM
(Italy) 28 Juunyo 2019. Wargeyska “Tuttosport” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu shaaca ka qaaday xiliga ay sida rasmiga ah ugu dhawaaqi doonto Juventus saxiixa xiddiga khadka dhexe reer France iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Adrien Rabiot.
Sida laga soo xigtay wargeyska kooxda Juventus ayaa heshiis la gaartay Adrien Rabiot, waxaana kaga harsan inuu ku biiro kaliya marka uu soo idlaado qandaraaska uu ku joogo Paris Saint-Germain.
Adrien Rabiot ayaa wuxuu bar-tilmaameed buuxa u ahaa kooxo ka dhisan Yurub, sida Barcelona, ​​Manchester United iyo Bayern Munich.
Yeelkadeeda, heshiiska Adrien Rabiot ee kooxda PSG ayaa wuxuu dhacayaa 1-da July, waana xiliga ay Juventus shaaca ka qaadi doonno saxiixiisa.
24 jirkan ayaa u ciyaaray kooxdiisa Paris Saint-Germain in ka badan 200 oo kulan, wuxuuna la qaaday 6 koob ee ah horyaalka Faransiiska, si kastaba ha ahaatee wuxuu muran xoogan ee ku aadan qanadaraaskiisa la galay maamulka kooxda taasoo dhalisay dhibaato xoogan oo ka dhigtay inuu banaanka ka noqdo kooxda tan iyo bishii December.
Adrien Rabiot ayaa lala xiriirinayey Barcelona iyo Manchester United, balse wuxuu haatan u muuqdaa mid si xur ah ugu biiri doono naadiga Bianconeri xili ciyaareedka soo socda.
Alisson Becker oo farriin muhiim ah u diray saaxiibadiis xulka Brazil, kaddib guushii ay ka gaareen Paraguay